HighQuality Latex memory amagwebu umqamelo Ihowuliseyili-Rayson Spring umatrasi yoMvelisi | Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezeMizi-mveliso, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Iimveliso eziphambili Umgangatho weLatex inkumbulo amagwebu umqamelo Umthengisi we-Wholesale-Rayson Spring umatrasi
Isinki yokufudumeza imveliso iyilelwe ukukhupha ubushushu ekukhanyeni emva koko ubudlulisele emoyeni.
The facto Siyathembisa ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi zikhuselekile kwaye zivakala. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ufuna ukwazi okungakumbi malunga nathi, Tsalela umnxeba ngqo. Ngaphezu koko, ukuhanjiswa kwethu ngexesha elifanelekileyo kwaye kunokuhlangabezana neemfuno zabo bonke abathengi. Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo? I-LC kumbono / nge-TT, i-30% ye-Deposi kunye ne-70% eseleyo ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa witinin iintsuku zokusebenza ezisi-7. Sinako ukwenza umatrasi ngokokuyila kwakho okanye ukubonelela ngenkonzo ye-OEM sifuna nje ukuba usinike imveliso yakho yobugcisa okanye iifoto zelogo. 1. Beka ibhokisi kwindawo ethe tyaba kwigumbi lakho lokulala, tsala ngononophelo umatrasi uze ubeke ebhedini yakho. 2.Sika isikhwama sangaphandle ngononophelo ngesikere uqiniseke ukuba awusiki iplastiki embi ngaphakathi okanye umatrasi, musa ukumangalela imela. 3.Qengqa umatrasi otywiniweyo ongenamntu uyokulala ebhedini yakho 4.Yisika ngononophelo ingxowa yeplastiki ecaleni kwewotshi njengoko umatrasi uqala ukubola, Susa ingxowa yeplastiki. Vumela iiyure ezingama-24 ukuba umatrasi wakho omtsha wandise ngokupheleleyo.